Programmer, Programming နှင့် Program (Software) ဘာကွာသလဲ ? - Active IT
by thantsin | May 28, 2019 | Developer, Development |0comments
Programming ဆိုတာဘာလဲ? Programming နဲ့ Software ဘာကွာသလဲ စသည်ဖြင့် ကျွန်တော်တို့ Page မှာလာလာမေးကြတဲ့အတွက် ဒီနေ့ တော့ Programming, Programmer, Program စတာတွေ ကြားမှာဘာကွာခြားလဲဆိုတာ ကျွန်တော် တက်နိုင်သလောက် ရှင်းပြသွားပါမယ်.
Programming ဒါမှမဟုတ် Programmer တွေအကြောင်းမပြောခင် နားလည်ရလွယ်အောင် ကျွန်တော်တို့ နဲ့ အရင်းနှီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Program တွေအကြောင်း စပြောတာပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်.
တချို့ကလည်း Program, Software, Application စသည်ဖြင့် ပြောရင် ဘာမှန်းမသိကြဘူး. အမှန်တော့ Program ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းတွေထဲ ကွန်ပျူတာတွေထဲမှာ နေ့စဥ်ထိတွေ့ နေရတဲ့ဟာတွေပါပဲ.
ဥပမာ Facebook ဟာ Program တစ်ခုပါ.. ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းတွေထဲမှာပါတဲ့ ဂဏန်းပေါင်းစက်ဟာလည်း Program တစ်ခုပါပဲ.. ကျွန်တော်တို့ အတွက် အလုပ်တစ်ခုခုပြီးမြောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဟာတွေကို Program တွေလို့ ခေါ်တာပါ.
Excel နဲ့ဆို စာရင်းတွက်လို့ ရမယ်. Word နဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေလုပ်လို့ရမယ်. ဂိမ်းဆိုရင်လည်း ဆော့လို့ ရမယ်ပေါ့ ။ အဲ့လိုမျိုး ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ တစ်ခုခုလုပ်လို့ရတဲ့ဟာတိုင်းကို Program လို့ခေါ်တာပါ. Program တွေကို Software, Application စသည်ဖြင့်လည်း ခေါ်ကြပါသေးတယ်။
Programming ဆိုတာကတော့ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ Program တွေကို ရေးတဲ့ အတက်ပညာပါပဲ. Software တစ်ခုကို စာအုပ်တစ်လုပ်လို့ သဘောထားမယ်ဆို Programming ဆိုတာ စာရေးနည်းလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အင်္ဂလိပ်စာ မြန်မာစာ၊ ဂျပန်စာ၊ စသည်ဖြင့် ဘာသာစကားပေါင်းမျိုးစုံရှိသလို Programming မှာလည်း C#, Java, NodeJS, Python, PHP စသည်ဖြင့် ဘာသာစကားတွေ ရှိပါတယ်.
လူတစ်‌ယောက် အကြောင်းကို မြန်မာလိုရေးလည်းရသလို အင်္ဂလိပ်လိုလည်းရေးလို့ရပါတယ်..အဲ့လိုပဲ ကွန်ပျူတာ Program တစ်ခုကိုလည်း ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရာ Programming Language တစ်ခုကိုသုံးပြီးရေးလို့ရပါတယ်.
တစ်ခုသတိထားစရာရှိတာကတော့ တချို့ သောအကြောင်းအရာတွေဟာ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာစကားနဲ့ ရေးမှ အဆင်ပြေသလို တချို့ သော Program တွေဟာလည်း သူတို့နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Programming Language ကိုသုံးပြီးရေးမှ အဆင်ပြေပါတယ်..
၂၀၁၀ ဝန်းကျင်လောက်ကနဲ့ တူတယ် ဂျာမန်တွေက မြန်မာ ဝတ္တုတို ၂၅ ပုဒ်ကို ဘာသာပြန်ပြီး ထုတ်တယ်.. အဲ့မှာ သူတို့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခက်အခဲက ဘာလဲဆိုတော့ အတွေးအခေါ်မှာမူတည်ပြီးဆင်းသက်လာတဲ့ ဝေါဟာရတွေခြင်းမတူတာ.
ဆရာသုမောင် ရဲ့ ဝတ္တုတိုလို့ မှတ်မိတယ် “ဝဋ်ကြွေး” ဆိုတာ.. အဲ့ဒါကို ဂျာမန်လို ပြန်တော့ သူတို့ အနောက်တိုင်းမှာ ဝဋ်ကြွေး ဆိုတဲ့ အယူအဆမရှိဘူး အဲ့တော့ စကားလုံးလည်းမရှိဘူး. အဲ့အခါမှာ ဘာသာပြန်ရတာ တော်တော်ခက်တယ်ပေါ့.
Programming Language တစ်ခုခုသုံးပြီး Program တစ်ခုကို ဖန်တီးရာမှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်နဲ့ သင့်တော်တဲ့ ဘာသာစကားဖြစ်ရင်ပိုအဆင်ပြေတယ်. အဲ့ဒါကြောင့် Programmer အများစုဟာ Programming Language တစ်ခုထက်ကိုပိုပြီး လေ့လာကြတာပါ..
Programmer ဒါမဟုတ် Developer လို့လည်း ခေါ်ကြတဲ့လူတွေကတော့ Programming Language တစ်ခုခုကို လေ့လာပြီး Program ရေးသားကြတဲ့လူတွေပေါ့ . အပြင်မှာဆို စာရေးဆရာလိုမျိုးပေါ့ .
ထပ်ခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ Programmer တွေမှာမှ Web Developer, Mobile Developer စသည်ဖြင့် ထပ်ကွဲပါသေးတယ်.. သဘောကတော့ စာရေးဆရာတွေထဲမှာတောင် ဝတ္တုချည်းရေးတဲ့လူ ကဗျာချည်းရေးတဲ့လူ. ဆောင်းပါးတွေပဲ အရေးများတဲ့သူ စသည်ဖြင့် ကွဲသလိုပဲ Programmer တွေကြားထဲမှာလည်း သန်ရာ သန်ရာတွေရှိပါတယ်..
ဖန်တရာတေ ဖြစ်ပေမဲ့ ထပ်ပြောချင်တာက Programmer ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေအဖို့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အပိုင်းကိုအရင်သိအောင်လုပ်ဖို့ပါပဲ.. ဘာသာရေးစာအုပ်တွေထိုင်ဖတ်ပြီး ဝတ္တုရေးဖို့ အဆင်မပြေသလို၊ ကဗျာ တွေဖတ်ပြီး တက်ကျမ်း တစ်အုပ်ထရေးဖို့လည်း မလွယ်လှပါဘူး.. အဲ့လိုပါပဲ.. လူပြောများလို့ NodeJS သင်ပြီး 3D ဂိမ်းဆွဲဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော်လေးကို သောက်ကျိုးနည်းမှာပါ.